AutoCAD 2012 Nini? -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/AutoCAD 2012 nini?
Kule ntwasahlobo siza kubona uhlobo olutsha lwe-AutoCAD 2012, ezinye iindaba zisenza sibonakale ngathi sele zikufutshane kakhulu. Asazi okuninzi esinokukulindela, ngaphandle kokuthetha ngabantu base-Anglo-Saxon, kunye nam ukutsho kwangaphambili, ulindelo lwam ngoku lujolise kwizinto esizibonayo njengezinto ezintsha AutoCAD WS ukuba ndinomdla kwaye ndixakekile.
Ngoku ngoku ndishiya i-4 links ukuze uqaphele ukufika kwe-AutoCAD 2012
1 Thenga i-AutoCAD 2011 uze ufumane i-AutoCAD 2012 mahhala
Olu lonyuso lwe-AutoDesk olusungulwe kwiAmazon, lusebenza kuthengiso olwenziwe kwiqonga le-Intanethi nakwixabiso elisondele kakhulu kwi-US $ 1,000. Isebenza phantsi kwendlela yokubhalisela kwaye ziinguqulelo ze-LT.
Akulunganga kulabo abalinde inguqulo ye-2012 ukuba bangene kwaye abayikwazi ukulinda.
2. AUGIMEXCCA ukuvala ixesha elithile
Lo mbutho omkhulu oqokelela umrhumo wabasebenzisi baseSpeyin baseMexico, eMbindi yaseMelika naseCaribbean, apho thethayo ngaphambili umisiwe, nangona kungenjalo inguqu yamazwe ngamazwe. Siyazi ukuba ukuthatha umhlala-phantsi ngokuyinxenye kulunge, nangona kusishiyele isikhewu esikhulu ukuba sijonga inani lezixhobo ezazikho. Siyathemba ukuba ukubuya kwakho kuya kwenza ukubonwa kweevidiyo kunye nokusebenziseka kokukhangela umxholo Siqinisekile ngento ethile, ukubuya kwakhe kuya kuba ngaphambi kokufika kwe-AutoCAD 2012.
3 Indawo yaseSpeyin yabasebenzisi be-AutoDesk
Oku kutshanje kuphehlelelwe, ngezixhobo ezilungileyo, amakhonkco kunye neendaba. Okwangoku, umxholo weeblogi zeSpanishi zimbalwa, kodwa njengoko iqonga lisasazeka kwaye lifudumala, siya kuba nokuninzi. Indawo enomdla ukugcina umkhondo ekufikeni kwe-AutoCAD 2012, nangona ndifumana umbono wokuba i-AUGI inokufudukela apha kanye njengokuba iBentley yenzayo ngee-network zayo ezazisasazekile (kubandakanya i-Askinga).
4. Khuphela i-AutoCAD 2012 simahla
Oku kusebenza kunye Ubuntu beBetDesk beta (eyayisakuba yiMyfeedback), ekuvumela ukuba ukhuphele ngaphandle iinguqulelo ezingagqitywanga zokuvavanya ngaphambi kokuba ifike ingxelo yokukhupha. Kule nto kufuneka ubhalise, kubandakanya uhlobo lweenkqubo ze-AutoDesk ofuna ukuzivavanya, ubhalise uhlobo lomatshini esiza kuvavanywa kwaye kwiintsuku ezimbalwa siya kufumana ikhonkco leeprojekthi ezinxulumene noko ukuze sikwazi ukukhuphela ingxelo epheleleyo ngeenjongo ukuvavanya.
5. Masithethe nge-AutoCAD
Okokugqibela, andinakusilela ukukhankanya indawo esishiye sanelisekile ngendlela ezazisa ngayo iindaba ze-AutoCAD 2011. Ndithetha Ibhulogi kaFernando MontañoMakhe sithethe nge-AutoCAD, apho sinokuba neendaba ezininzi malunga nokufika kwe-2012 version kunye nayo yonke into ecacileyo.
Kulekhonkco ndibonisa imiba yokuqala ngokuphathelele iindaba ze-AutoCAD 2012.